Best Forex Trading Tips to BecomeaPro! - Learn2Trade July 2022
Forex ကုန်သွယ်မှုအကြံပေးချက်များကိုရှာဖွေနေပါသလား။ trading forex သည် တသမတ်တည်း အမြတ်အစွန်းများရရှိရန်နှင့် သင်၏ ကုန်သွယ်မှုအစုစုကို ကွဲပြားစေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ အသစ်စက်စက် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတစ်ယောက်ဆိုရင် – သင့် forex အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို မှန်ကန်တဲ့ခြေဖဝါးပေါ်ရောက်အောင် သေချာစေဖို့ ညွှန်ပြချက်အနည်းငယ် လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အရေးကြီးသည်မှာ၊ Forex ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းသည် သင့်လက်ရှိကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးမြင့်လာစေသည့်အပြင် အသစ်အဆန်းတစ်ခုခုကို သင်ယူနိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
၂၀၂၀ ရဲ့အရေးအကြီးဆုံး forex trading ၁၀ ချက်ကိုအတူတကွသင်ပြီးပါပြီ။ သင်သတိပြုသင့်သည်
Forex Trading အကြံပြုချက် 1- Forex စျေးကွက်များကို နားလည်ပါ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေများကိုမစွန့်လွှတ်မီ Forex စျေးကွက်ကိုကောင်းစွာနားလည်ရန်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အလေးထားရမည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငွေကြေးအတွဲများကဲ့သို့သောအရာများကိုသင်ကြားရန်အချိန်ယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် ပျံ့နှံ့နှင့် အသုံးချမှု – သင်သည် ရေရှည်တွင် သင့်ကိုယ်သင် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ငွေကြေးများစွာကို သက်သာစေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex trading tips စာမျက်နှာ၏ကန ဦး ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ကျဆင်းခြင်းမပြုမီနားလည်ရမည့်အရေးကြီးဆုံးအရာများကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုငွေကြေး pair တစုံကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေး2၏ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏တန်ဖိုးသည်ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းကိုအခြေခံသည်။
ဥပမာအနေနဲ့ EUR / USD ကိုသုံးရအောင်။ ဤငွေကြေးအတွဲတွင်ယူရိုသည်“ အခြေခံငွေကြေး” ဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာသည်“ ကိုးကားငွေကြေး” ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ငွေကြေးကိုသင်အသုံးပြုနေပါစေဤကိစ္စသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
တနည်းအားဖြင့်အခြေခံငွေကြေးသည်ပထမ ဦး စွာပထမနှင့်ဒုတိယငွေကြေးကိုဒုတိယကိုးကားလိမ့်မည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ ပထမနှင့်ဒုတိယငွေကြေးသည်အားပျော့သို့မဟုတ်အားကောင်းနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်ရာငွေလဲနှုန်းသည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသည်။
အကယ်၍ အခြေခံငွေကြေးသည်ကိုးကားထားသောငွေကြေးထက်ပိုမိုအားကောင်းလာပါကငွေကြေးအတွဲ၏တန်ဖိုးကိုတက်သွားလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အခြေခံငွေကြေးအားနည်းလာလျှင်, ငွေကြေး pair တစုံတန်ဖိုးကိုကျလိမ့်မည်။
အမိန့်များသည်သင်စိတ်ဝင်စားသောကုန်သွယ်မှုကို ၀ င်ခွင့်သို့မဟုတ်ထွက်ခွင့်ပြုသည်။ ဤအမိန့်များသည်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဖြစ်ပြီး ၀ ယ်ခြင်းအမိန့်နှင့်ရောင်းချမှုအမိန့်များဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်၊ ၀ ယ်ရန်အမှာစာသည်ငွေကြေးတန်ဖိုးတိုးတက်လာမည်ဟုသင်ထင်ကြောင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဆိုလိုသည်ဟုဖော်ပြသည်။
သင့်ငွေကြေးအတွဲသည် EUR/USD ဖြစ်ပြီး EUR ၏တန်ဖိုးမှာ 1.1334 ဖြစ်သည်ဆိုကြပါစို့။
EUR သည် USD နှင့် ယှဉ်တက်လာမည်ဟု သင်သံသယဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် သင်၏ပွဲစားထံ ၀ယ်ယူမှုတစ်ခုကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ထို့နောက်သင်“ စျေးကွက်” အမိန့်ကိုအသုံးပြုလို၊ မလိုကန့်သတ်ထားသောအမိန့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ စျေးကွက်အမှာစာပေးခြင်းအားဖြင့်သင်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ရန် (သို့) ရောင်းရန်အမိန့်ကိုစီစဉ်ထားသည်။
အခုတော့သတိရပါစျေးနှုန်းတောင်းဆိုနေသောငွေကြေး pair တစုံစျေးနှုန်းတစ်စက္ကန့်အခြေခံပေါ်မှာပြောင်းလဲအဖြစ်လက်သည်းအပေါ် 1.1334 ဖြစ်ဖွယ်မရှိကြောင်းသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်အမိန့်သည်သင့်အား ၁.၁၃၃၄ အထက်သို့မဟုတ်အောက်စျေးကိုရရှိလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်ကန့်သတ်အမှာစာချထားခဲ့လျှင်, သင်စျေးကွက်ဝင်စျေးနှုန်းအတိအကျကိုသတ်မှတ်ရ။ သို့သော်သင်အမိန့်မတိုင်မီစျေးနှုန်းကိုအခြားရောင်းသူတစ် ဦး နှင့်လိုက်ဖက်ရန်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Forex ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်မှုတိုင်းသည်သီးခြားစျေးနှစ်မျိုး - ၀ ယ်စျေးနှင့်ရောင်းဈေးတို့ပါ ၀ င်သည်။ စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဟုလူသိများသည်။ ဒါဟာ Forex ကုန်သွယ်ခရီး၏တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်, spreads ၏အခြေခံနားလည်မှုရှိသည်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့၊ ၀ ယ်မည့်စျေးသည် ၁.၁၃၃၅ နှင့်ရောင်းဈေးမှာ ၁.၁၃၃၀ ဖြစ်သည်။
1.1334 (ဝယ်) - 1.1330 (ရောင်း) = 0.0004 (pips).
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပျံ့နှံ့ ၀.0.0004 ဆိုတာဝယ်နဲ့ရောင်းဈေးကကွာခြားချက်ပါ။
ကုန်သွယ်ရေးနေ့တစ်လျှောက်လုံးပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့သည်။ ဤပြန့်ပွားမှုသည်အမျိုးမျိုးသောအချက်များဖြစ်သည့်ငွေဖြစ်လွယ်မှု (ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုမည်မျှလျင်မြန်စွာ ၀ ယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ရောင်းနိုင်မည်) နှင့်မတည်ငြိမ်မှုများ (forex ကုန်သွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ၏ပြောင်းလဲမှုလှုပ်ရှားမှု) တို့နှင့်လွှမ်းမိုးနေသည်။
အဓိကငွေကြေးအတွဲများသည်အဓိကသို့မဟုတ်ထူးကဲသောငွေကြေးများထက်များစွာပိုမိုသောပမာဏဖြင့်ကုန်သွယ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ငွေကြေးလေ ၀ ယ်လိုအား ပို၍ များလေလေကုန်သွယ်စရိတ်နည်းလေလေဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြန့်နှံ့ (ပိုမိုတင်းကျပ်) နိမ့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
အဓိကသို့မဟုတ် ပို၍ ထူးခြားသောငွေကြေးအတွဲများသည်ကုန်သွယ်မှုပမာဏနည်းသောကြောင့်ဗိုလ်ကြီးများထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပျံ့နှံ့မှုရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တစ်အမြဲတမ်းပြန့်ပွားမှုပမာဏကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားမိစေရန်ကြိုးစားပါ။
အခြေခံအားဖြင့်, သြဇာသင့်ရဲ့အလားအလာပြန်များပြားရန်အသုံးပြုသောအရင်းအနှီးချေးငွေနှင့်အမြတ်အစွန်းစေရန်ကုန်သွယ်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ Forex ပွဲစားနှင့်ငွေစာရင်းဖွင့်သောအခါသင့်အားသြဇာပေးလိမ့်မည်။
သင်အိမ်ခြံမြေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားလျှင်, သေးငယ်တဲ့ငွေပေးချေမှုနှင့်အတူစျေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ထား။ တစ်နည်းပြောရရင်သင်ဟာငွေပမာဏအနည်းငယ်သုံးပြီးကြီးကြီးမားမားပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်နေတယ်။
Forex သြဇာသည် ၁: ၂ မှ ၁း၅၀၀ အထိအထိရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေ၏ £200 လောင်းကာ 1:20 (သို့မဟုတ် 20x) ၏ leverage ကိုသုံးပါက၊ ဆိုလိုသည်မှာ £200 ဖြင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်မည့်အစား သင်သည် ယခု £4,000 (£200 x 20) ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။
တူညီသော £200 လောင်းကြေးဖြင့် 1% အမြတ်များရပါက သာမာန်အားဖြင့် £2 (£1 ၏ 200% လောင်းကြေး) ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်၊ 20x ပမာဏဖြင့်၊ သင်၏အမြတ်ငွေသည် အမှန်တကယ် £40 (£2 x 20) ဖြစ်လိမ့်မည်။
Leverage နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် သင်၏ကန့်သတ်ချက်များကို သိရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အညီ သင်၏ leverage အချိုးကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် သင်တတ်နိုင်သည်ထက် ပိုဆုံးရှုံးနေသည့် အနေအထားတွင် သင့်ကိုယ်သင် တွေ့ရနိုင်ခြေနည်းပါသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်၏ဘဏ္finာရေးကိုအမှန်တကယ်ကြည့်ရှု။ သင်၏လက်တွေ့ကျသောဘတ်ဂျက်နှင့်မည်သည့်အရာကဆုံးရှုံးမှုကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ ဘေးထွက်အစွန်အဖျား, wမတည်ငြိမ်သောအဆင့်များသည်ပြtroubleနာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်၊
'Pip' သည် 'ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်း' အတွက်အတိုကောက်ဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်အတွင်းငွေကြေးစုံတွဲတစ်တွဲပြောင်းလဲသွားမည့်အနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ပိုက်သည်ငွေကြေးအတွဲတွင်မှတ်သားထားသောသေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြသည်။
ဤစံသတ်မှတ်ချက်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများမှကာကွယ်ပေးသည်။ ပိုက်ကိုအခြေခံငွေကြေး (သို့) ကိုးကားချက်ဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်၊ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်စံသတ်မှတ်ထားပြီးယေဘုယျအားဖြင့်စျေးနှုန်းကိုးကားချက်၏နောက်ဆုံးဒdecimalမနေရာဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်တွင် ၁.၂၄၀၀ ဖြစ်သော GBP / USD အတွက်ကိုးကားချက်များရှိသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဆိုလိုတာက£ 1.2400 တိုင်းကိုသင်ဒေါ်လာ ၁.၂၄၀၀ ၀ ယ်နိုင်တယ်။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး pip ကို 1 တိုးမြှင့်ခဲ့လျှင်ထိုစုံတွဲသည်ယခုအခါ ၁.၂၄၀၁ တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွဲများနှင့်ပတ်သက်လျှင်ပိုက်သည်ကိုးကားသောစျေးနှုန်း၏ဒေါ်လာ ၀.၀၀၀၁ ဖြစ်လေ့ရှိပြီးမကြာခဏအခြေခံအချက် ၁ ချက်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တစ် ပိုက် 1% ၏ 100/1 ဖြစ်၏ သို့မဟုတ်လေးဒdecimalမသောနေရာများ။ ဤနည်းဥပဒေ၏အဓိကချွင်းချက်မှာအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ် ဦး က margin ကအနိမ့်ငွေပေးချေမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ သင်စျေးကွက်အတွင်းရာထူးများကိုရောင်းဝယ်ရန်နှင့်သင်ထိန်းသိမ်းထားရန်သင်အပ်နှံထားသောငွေပမာဏဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့အနေအထားတက်ကြွနေစဉ်သင်ကစားခြင်း၌သြဇာရှိပါကသင်၏အနားသတ်ကို Forex ပွဲစားကကြည့်ရှုလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုန်သည်ဟာအဓိကအားဖြင့်ပွဲစားဆီကနေငွေချေးတာကြောင့်ပဲ။ ထို့ကြောင့်သင်၌ပေါင် ၁၀၀ ရှိပြီးပေါင် ၁၀၀၀ နှင့်ကုန်သွယ်လိုပါကသင်၏သြဇာသည် ၁း၁၀ ဖြစ်သည်။ ဒါဆိုရင်ပေါင် ၁၀၀၀ ရဲ့ ၁၀% ကသင့်ရဲ့အနားကပေါင် ၁၀၀ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
Forex Trading ၏ ထိပ်ဖျား ၂: အစီအစဉ်ဆွဲ။ ၎င်းကိုကပ်ပါ
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး Forex trading အကြံပေးချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာသင်၏ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်များကိုစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အစီအစဉ်တွင်နေ့စဉ်အမြတ်ပစ်မှတ်များ၊ ဘဏ်အပ်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သုတေသနနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတွင်သင်သုံးစွဲလိုသောတစ်နေ့လျှင်နာရီအရေအတွက်ပါဝင်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးကာလအတွင်းထွက်ပေါက်အစီအစဉ်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာသင်ရာထူးကိုပိတ်လိုက်သည့်အတွက်သင်အမြတ်အစွန်း (သို့) အရှုံးတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်သင်သည်အမှာစာမချခင်အမြတ်အစွန်းကိုစိတ်ထဲထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် GBP / USD ကိုသင်ရောင်းနေသည်ဆိုပါစို့။ ဒီအတွဲရဲ့ဈေးနှုန်းကတက်လိမ့်မယ်လို့သင်ထင်တယ်၊ သို့သော်၊ သင်မပြုလုပ်မီ၊ သင်သည်အမြတ်ယူရန်အမိန့်ကိုလည်းချထားသည်။ ဤသည်အနေအထားအရွယ်အစား 1% ပမာဏသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်သင်၏အမြတ်အစွန်းသည် ၁% ဖြစ်ပြီး၊ ဤအမြတ်အစွန်းထွက်လာသောအခါသင်၏ရာထူးကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
နေ့စဉ်သုတေသန / ​​အချိန်ဆည်းကပ်
သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအာရုံစိုက်ရန်စျေးကွက်အနည်းငယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ရည်မှန်းချက်အချို့ချမှတ်ခြင်းသည်ကောင်း၏။ Forex trading လုပ်ရန်အချိန်မည်မျှကြာမည်ဟုသင်စဉ်းစားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊
၎င်းသည် သင့်အား မှန်ကန်သော ကုန်သွယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသောကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးသတင်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုကို လေ့လာခြင်းအတွက် အချိန်အနည်းငယ်အပ်နှံခြင်းသည်လည်း အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်သောစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးကြီးတာက မီတာ၊မည်သည့်ကုန်သည်များသည်ဒိုင်ယာရီကိုစောင့်ရှောက်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုလှုပ်ရှားမှုကိုသတိပြုမိခြင်းဖြင့်အနာဂတ်၌သင်၏ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
Forex Trading ၏ သိကောင်းစရာ ၃ - အမြဲတမ်း Demo အကောင့်တခုခုဖြင့်စတင်ပါ
Forex သရုပ်ပြအကောင့်များသည်လူသစ်များအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုယူဆလျှင်သင့်ကိုခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံးကုန်သည်များအတွက်အလွန်အကျိုးရှိပါတယ် နှင့် ရောနှောအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များ။ နေ့စဉ်ဒေါ်လာ ၅ ထရီလီယံကျော်လှည့်နေသောစျေးကွက်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည့်အလားအလာရှိနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်လက်တွေ့ဘ ၀ စျေးကွက်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့သရုပ်ပြအကောင့်တခုမှာလုပ်လေ့လုပ်ထလုပ်တာကအဓိပ္ပါယ်ရှိတာပဲ။
သင်အစမှစလေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ Forex trading မဟာဗျူဟာအတွေးအမြင်အသစ်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုခြင်းရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ demo account ဖွင့်ခြင်းသည်မည်သည့်ကုန်သည်အတွက်မဆိုပညာရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။
Forex demo အကောင့်ဖြင့်သင်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာမှာလိုလိုနည်းပညာညွှန်းကိန်းများနှင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ခြားနားချက်ကတော့၊ ခင်ဗျားဟာတကယ့်ငွေကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ယင်းအစားသင့်အားကုန်သွယ်ရန် 'demo' ရန်ပုံငွေများကိုသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ပွဲစားပလက်ဖောင်းအများစုတွင် Forex demo account option ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာကြာလိမ့်မည်။
Forex Trading ၏ သိကောင်းစရာ ၄ - နည်းပညာနှင့်အခြေခံသုတေသန
နည်းပညာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်လုံးဝဆန့်ကျင်မှုရှိသော်လည်း Forex စျေးနှုန်းများကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းစသည်တို့တွင်အကျိုးရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဒီသင်ကျွမ်းကျင်ဖို့အတှကျအရေးအပါဆုံး Forex ကုန်သွယ်ရေးအကြံပေးချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခိုးအငွေ့ကိုရှင်းလင်းရန်အတွက်အောက်တွင်သုတေသနနည်းလမ်းနှစ်ခုလုံး၏အတိုချုပ်ရှင်းပြချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Fundamental Analysis သည် ငွေရေးကြေးရေး ပတ်၀န်းကျင်၏ အလုံးစုံအခြေအနေကို လေ့လာသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှု၊ စီးပွားရေး (အလုပ်လက်မဲ့စသည်ဖြင့်) သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကဲ့သို့သော ငွေကြေးစျေးနှုန်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ Covid-19.
အဓိကအားဖြင့်ရောင်းလိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားသည်ငွေကြေး၏စျေးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့်စီးပွားရေး၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သောအရာများကိုလေ့လာရန်မှာသဘာဝကျပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် အကယ်၍ စီးပွားရေးသည်ဆိုးရွားစွာလုပ်ဆောင်နေပါက၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာငွေကြေးသည်ခံရနိုင်သည်။
IMF မှ သုံးသပ်ချက်။
'သင်္ချာပရမ်းပတာသီအိုရီ' သည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အပြည့်အဝသက်ဆိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတက်လာသည့်အရာသည်ပြိုလဲရမည်၊ ထို့ကြောင့်ပုံစံများသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ၊ စျေးနှုန်းဇယားများနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုညွှန်းကိန်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် - သမိုင်းဆိုင်ရာ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်သင်ကူညီနိုင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဤသမိုင်း ၀ င်ပမာဏနှင့်စျေးနှုန်းအချက်အလက်များကိုအဓိကအားဖြင့်စျေးကွက်နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်စိတ်ပညာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးအစားသည်မည်သည့်အခြေခံသတ်မှတ်တန်ဖိုးကိုမျှတိုင်းတာခြင်းမရှိပါ။ အဲဒီအစားကုန်သည်အများစုကစျေးနှုန်းပုံစံများဟာနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့် Forex စျေးနှုန်းသမိုင်းကိုလည်းလေ့လာသင့်သည် လှုပ်ရှားမှုများ.
ဤအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကုန်သွယ်မှုကိုမည်သည့်အချိန်၌ ၀ င်ရောက်ထွက်ခွာရမည်ကိုသိရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအစဖြစ်သည်။ Forex ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်ဝယ်ယူ / ရောင်းဝယ်မှုသည်အကျဘက်တွင်ကျဆင်းနေသည်၊ သို့မဟုတ်မြင့်တက်နေသလားဆိုသည်ကိုသင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်စျေးကွက် ၀ င်များအနေဖြင့်နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုပိုကောင်းအောင်သင်ပေးနိုင်သည်။
ဤတွင်သင်လေ့လာနိုင်သည့်နည်းပညာဆန်းစစ်ချက်ဇယား (၃) မျိုးရှိပါသည်။
COT အချက်အလက်နှင့် ရာထူးအကျဉ်းချုပ်များ။
သင်လိုချင်လျှင်သင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာကိရိယာများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ တကယ်တော့၊ ဒီအပိုသတင်းအချက်အလက်ကသင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သတိပြုသင့်သည်မှာ Forex ပွဲစားတစ်ခုချင်းစီသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်သင့်အတွက်တူညီသော tools များရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် ဦး စွာသုတေသနလုပ်ပြီးသင်၏ကုန်သွယ်မှုပုံစံနှင့်မည်သည့်အရာနှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုကြည့်ပါ။
Forex Trading ၏ သိကောင်းစရာ ၅ - သင့်ဘဏ္Financialာရေးအကန့်အသတ်ကိုသိထားပါ
သင်အောင်မြင်သောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လိုလျှင်သင်၏ကန့်သတ်ချက်ကိုသိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ညွှန်ပြရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Forex trading tips အချို့ရှိသည်။
အမိန့်ကိုရပ်တန့ ်၍ ကန့်သတ်ပါ
မြင့်မားသော ပမာဏသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကြီးမားသော အကျိုးအမြတ်များ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လည်း ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့ အလားအလာ အမြဲရှိပါတယ်။ ကုန်သည်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလေ့ရှိသည့်အဓိကအမိန့်နှစ်ခုမှာ 'stop' နှင့် 'limit' အမိန့်များဖြစ်သည်။
ကန့်သတ်ချက်ရှိသောအမိန့်သည် ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်သင်အနိမ့်ဆုံးသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Stop Order သည်သင်ဝယ်ယူလိုသောသို့မဟုတ်ရောင်းလိုသောတိကျသောစျေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုစျေးနှုန်းထက် ကျော်လွန်၍ မရနိုင်ပါ။ သင်တိုတောင်းသောအနေအထားရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါကစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မည် အောက်တွင် ပထမ ဦး ဆုံးပစ်မှတ်အဖြစ်လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေး။ ၎င်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်သင်သည်အမှာစာကိုလက်ရှိစျေးနှုန်းထက် ပို၍ တင်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရှည်လျားသောရာထူးဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါကစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မည် အထက် သင်ကနေအမြတ်အစွန်းရနိုင်အောင်လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေး။ ထို့နောက်သင်လက်ရှိစျေးနှုန်းအောက်တွင်ရပ်တန့်ရန်အမိန့်သတ်မှတ်မည်၊ သို့မှသာသင်၏အနေအထားပေါ်ရှိဆုံးရှုံးမှုကိုကြိုးစားစစ်ဆေးနိုင်သည်။
Stop and Limit အမိန့်များသည်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းများရရှိရန်နှင့်အနားယူခေါ်ဆိုမှုများကိုကန့်သတ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤအမိန့်များသည်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောကြောင့်လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်အညီသင်အချိန်မရွေးပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်ရေး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာစျေးကွက်ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှသင့်အားညှိနှိုင်းညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကုန်သွယ်မှုမှအမြတ်အစွန်းဖြင့်သင်ထွက်ခွာနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ကုန်သည်တွေက 'မင်းရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုတိုအောင်လျှော့ချပြီးမင်းရဲ့အမြတ်အစွန်းကိုရအောင်လုပ်ပါ' လို့ပြောချင်ပါတယ် ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒီနေရာမှာအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရန်အမိန့်လာနိုင်တယ်။
တစ် ဦး ကနောက်ကွယ်ကမှတ်တိုင် stop-loss သူတို့ရဲ့ချိုး - ပင်စျေးနှုန်း (သို့မဟုတ်ကန ဦး စျေးနှုန်း) ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ GBP / USD ငွေကြေးစုံသည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးသင့်ကိုဆန့်ကျင်နေပါကကန ဦး အနေအထားမှရရှိထားသည့်အမြတ်များကိုသင်ကာကွယ်နိုင်သည်။
Forex Trading ၏ သိကောင်းစရာ ၆ - Forex Trading ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါ
သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုသည်မည်မျှပင်အောင်မြင်ပါစေသင်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်အချို့သောကုန်ကျစရိတ်များကိုအမြဲတမ်းခံရလိမ့်မည်။ သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ကုန်ကျစရိတ်အချို့သည်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အမိန့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တိကျသောဘဏ္newsာရေးသတင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောစွဲချက်များကဲ့သို့လုံးဝရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပေးစွမ်းနိုင်သော အကောင်းဆုံး Forex ကုန်သွယ်မှု အကြံပြုချက်များထဲမှ တစ်ခုသည် တိုက်ရိုက်အခကြေးငွေများ၊ ကော်မရှင်များ သို့မဟုတ် အခြားသော ရှောင်လွှဲ၍မရသော ကုန်ကျစရိတ်များကို သင့်တွင် သေချာစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤကုန်ကျစရိတ်များသည် ပွဲစားတစ်ဦးချင်းစီပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် မကျူးလွန်မီ ဤနှုန်းထားများကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Forex ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်အသုံးအများဆုံးအခကြေးငွေများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုဖော်ပြထားသည်။
သင်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သောအခါ Forex ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်များကို ပွဲစားများမှ ကောက်ခံပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံစံ2ဖြင့်လာနိုင်သည်။ ပုံသေအခကြေးငွေများ (ကုန်သွယ်မှုပမာဏမခွဲခြားဘဲ) သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးအခကြေးငွေများ (ထုထည်ပိုမြင့်လေ၊ ကော်မရှင်ခ ပိုမြင့်လေ)။
ဆွေမျိုးအခကြေးငွေ၏ ဥပမာတစ်ခုသည် သင်ရောင်းသည် သို့မဟုတ် ဝယ်သည့်ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုစီ၏ ပေါင် 1 လျှင် ပွဲစားက သင့်အား ပေါင် 100,000 ပေးသည်။ GBP/EUR £1 million တန်သော စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုပါက ပွဲစားသည် ကော်မရှင်အတွက် £10 ယူပါမည်။ ပေါင် 10 သန်းနဲ့ ဝယ်ရင် ပွဲစားက ပေါင် 100 ကော်မရှင် ယူလိမ့်မယ်။
ပွဲစားတွင်ဆွေမျိုးတစ် ဦး ၏အခကြေးငွေကို ၁% ကောက်ခံသည်။ ထို့နောက်ပေါင် ၁၀၀၀ တန်သင့်အား£ 1 ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ပေါင် ၂၀၀၀ နှင့်ပေါင် ၂၀၀၀၀ ကုန်ကျမည်။
ကောင်းမွန်သောသတင်းကအကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများကသင့်အားကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်မပေးဘဲရာထူးများကို ၀ ယ ်၍ ရောင်းခွင့်ပြုသည်။ သင်ဤလမ်းညွှန်တွင်နောက်ထပ်ပွဲစားများကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဤစာမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုက်သည်နှင့်အမျှပျံ့နှံ့မှုသည်သင်၏ Forex ပွဲစားကသင့်အားကုန်သွယ်ရန်အားပေးသောအခကြေးငွေဖြစ်သည်။
ပွဲစားကသင့်အားသူတို့ကမ်းလှမ်းမည့်ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုစီအတွက်ဈေးနှုန်းနှစ်ခုကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ ဈေးနှုန်းနှစ်ခုသည်လေလံဈေးနှုန်း (၀ ယ်ရန်စျေးနှုန်း) နှင့်တောင်းသည့်စျေးနှုန်း (ရောင်းရန်စျေးနှုန်း) တို့ဖြစ်သည်။
ပြန့်ပွားမှုကိုမကြာခဏ pips (ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း) တွင်ဆွေးနွေးလေ့ရှိသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံ၎င်းကိုရာခိုင်နှုန်းသို့ပြောင်းလဲရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဤအရာသည်သင့်အားမည်မျှပေးဆပ်နေကြောင်းနှင့်ရှင်းလင်းစွာချိုးဖောက်ရန်အတွက်မည်မျှသင်မည်မျှပေးဆပ်သည်ကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာနားလည်စေပါလိမ့်မည်။
ဘေးထွက်အကြံပြုချက်အနေဖြင့်၊ ငွေကြေးသတင်းများ၊ မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို စောင့်ကြည့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပွဲစားသည် မတည်ငြိမ်သော စျေးကွက်အခြေအနေများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ပျံ့နှံ့မှုကို ချဲ့ထွင်ရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Wသင်စျေးကွက်တွင်နေရာတစ်ခုရှိနေသည်ဆိုလျှင်သင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည့်အခြားကုန်ကျစရိတ်မှာ“ overnight roller” ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာသင်ဝယ်သောသို့မဟုတ်ရောင်းသောငွေကြေးတစ်ခုစီ၏ညချင်းအတိုးနှုန်းဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Forex အတွဲတွေဟာဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာကဆိုလိုတာကသင်ဟာပွဲစားတစ်ယောက်ဆီကနေငွေချေးတာကိုဆိုလိုတာပါ။ သဘာဝကျကျ, ဒီစိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်။
ငွေပမာဏသည်အတိုးနှုန်းနှစ်ခု (ငွေကြေးတစ်ခုစီအတွက်) အကြားကွဲလွဲမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤနှုန်းထားများသည်သင်၏ပွဲစားများမဟုတ်ဘဲကြီးမားသောဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှဆုံးဖြတ်ကြသည်။
overnight oververter များသည်ရာခိုင်နှုန်းများအပေါ် မူတည်၍ တိုးမြှင့်သည့်တိုးမြှင့်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင်သင်အသုံးပြုလေလေ၊ ကုန်ကျစရိတ်များလေလေဖြစ်တယ်။
သတိပြုရမည့်နောက်ထပ်ကုန်ကျစရိတ်မှာ ဒေတာပေးပို့ခဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အများအားဖြင့် လစဉ်ကောက်ခံပါသည်။ ဒေတာသည် စျေးကွက်သို့ဝင်ရန်နှင့် ထွက်ရမည့်အချိန်၊ သင်၏ရာထူးများကို စီမံခန့်ခွဲနည်းနှင့် ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုများကို သတ်မှတ်သင့်သည့်နေရာတို့ကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် သင်ခံနိုင်ရည်ရှိရမည့် မရှိမဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပံ့ပိုးသူတိုင်းသည်အချက်အလက်ထည့်သွင်းမှုအတွက်ကွဲပြားသောအခကြေးငွေပေးရမည်ဖြစ်သဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှု၏သဘောသဘာဝနှင့်အရည်အသွေးပေါ်မူတည်သည်။ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခကိုမပေးမီအနည်းငယ်ကြိုးစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Forex ပွဲစားများသည်ငွေထုတ်ရန်မလိုပါ။ သို့သော်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီစည်းကမ်းချက်များကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ အပ်ငွေကြေးနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
သင်ရွေးချယ်သော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည် သင်၏ အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်သို့ရောက်ရှိရန် သင့်အပ်ငွေအတွက် လိုအပ်သောအချိန်အတိုင်းအတာအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကို သတိရပါ။ သို့ရာတွင်၊ သင်ထည့်သွင်းထားသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဘဏ်အပေါ်မူတည်၍ ကုန်ကျစရိတ်အချို့လည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
Forex Trading ၏ သိကောင်းစရာ ၇ - ကုန်သွယ်ရေးစိတ်ခံစားမှုများကိုစီမံခြင်း
ကုန်သွယ်ရေးစိတ်ပညာအရ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်လူတို့၏အဓိကစိတ်ခံစားမှု ၃ ခုရှိသည် - လောဘ၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ မျှော်လင့်ချက်။
သင်တက်ကြွစွာအရောင်းအဝယ်လုပ်နေသောအခါထိုစိတ်ခံစားမှုသုံးခုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကသင့်အားရေပူထဲကျစေနိုင်သည်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းများကိုအောင်မြင်မှု၏သော့ချက်ဟုမကြာခဏယူမှတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများဖြင့်ဖြစ်သည်။
လောဘကြီးခြင်းကြောင့်ကုန်သွယ်မှုမပြုရန်ကြိုးစားပါ။ လောဘကြီးသည်ကုန်သည်တစ် ဦး အတွက်စိတ်ခံစားမှုသုံးမျိုးအနက်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသက်တန့်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ရွှေအိုးကိုရှာတဲ့အခါကုန်သည်တွေကိုအလျင်အမြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စေလို့ပဲ။
Forex စျေးကွက်အတွက်မသေချာမရေရာသတိထားပါရန်ကြိုးစားပါ။ ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သင်ဟာကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးကိုသုတေသနပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Forex Trading ၏ အကြံပြုချက် 8- သင်၏ဗျူဟာကို ပြောင်းလဲရန် မကြောက်ပါနှင့်
ထိုဒေသရှိအတွေ့အကြုံအရှိဆုံး Forex ကုန်သည်အချို့သည်၎င်းတို့၏မဟာဗျူဟာကိုအချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲကာ၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်ကျိန်ဆိုကြသည်။ သင်ခဏတာတူညီတဲ့နည်းဗျူဟာကိုသုံးနေပြီးသင်ဖြစ်သင့်တဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုမခံစားရဘူးဆိုရင်မတူညီတဲ့ချဉ်းကပ်မှုမျိုးကိုကြိုးစားမတားဆီးနိုင်ပါ။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် သင်၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေသည် ယခင်နှင့်မတူကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပြီး သင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့် ပန်းတိုင်များကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ Forex demo အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာသင်အစီအစဉ်သစ်သည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိမလားနှင့်သင်မည်သို့ကုန်သွယ်လိုသည်ကိုခံစားရနိုင်သည်။
Forex Trading ၏ သိကောင်းစရာ ၉ - Forex Trading အကောင့်တခုဖွင့်နည်းကိုနားလည်ပါ
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိဘဲ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်း Forex ကုန်သွယ်ရေးအကြံပေးချက်များ၏ဤအပိုင်းကိုအကြွင်းမဲ့အာဏာအစပြုသူနှင့်သင့်လျော်သည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင်သင်၏ဘဝတွင် Forex ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုကိုတစ်ခါမျှမထားခဲ့ပါကကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခုမည်သို့တည်ထောင်ရမည်ကိုသင်မသိနိုင်ပေ။
သတင်းကောင်းကဤဖြစ်သည် အပိုင်းသည် အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး ရှေ့သို့တည့်တည့်ဖြစ်သော်လည်း၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင်စတင်ရန် ရိုးရှင်းသော အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုစုထားပါသည်။
အဆင့် ၁ - ပွဲစားကိုရှာပါ
သင်၏ကုန်သွယ်မှုပုံစံအတွက်မှန်ကန်သောပွဲစားကိုသင်ရှာရန်လိုအပ်သည်။ သင်မည်သည့်အကူအညီမဆိုလိုအပ်ပါက၎င်းကိုမည်သို့ရှာရမည်နှင့်မည်သည့်အရာများကိုရှာဖွေရမည်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သီးသန့်ထားရှိပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်စင်မြင့်တစ်ခုကိုသုတေသနပြုရန်အချိန်မရှိလျှင် ၂၀၂၀ ၏အကြံပြုထားသောထိပ်တန်းပွဲစား ၅ ဦး ကိုနောက်ထပ်စာရင်းပြုစုထားသည်။
အဆင့် ၂ - ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ
မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ဖွင့်လိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ အချို့သည်အနိမ့်ဆုံးကုန်သွယ်မှုအကောင့်လက်ကျန်ငွေလိုအပ်ချက်နှင့်အသေးစားဖြစ်လိမ့်မည်၊ အချို့မှာအတွေ့အကြုံရှိသောကုန်သည်များအတွက်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၃ - လျှောက်လွှာပုံစံ
ယခုသင်သည်ပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လျှောက်လွှာဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များမှာကွဲပြားပြီးများသောအားဖြင့်သင်၏အမည်အပြည့်အစုံနှင့်လိပ်စာအပြင်ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်နှင့်မွေးသက္ကရာဇ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
လစဉ်ဝင်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေနှင့် ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံများကဲ့သို့သော သင်၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေအကြောင်း အနည်းငယ်ပြောပြရန် လိုအပ်ပေမည်။ တစ်ဖန်၊ Forex ပွဲစားတစ်ခုစီသည် အနည်းငယ်ကွဲပြားလိမ့်မည်။
အဆင့် ၄ - အထောက်အထား
သင်၏ Forex အကောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုမပြီးဆုံးမီသင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်လိုအပ်သည်။ Forex ပွဲစားများအများစုသည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူကူးရန်လိုအပ်သည်။
အချို့မှာ utility bill တစ်ခုသို့မဟုတ်သင်၏အမည်နှင့်လူနေအိမ်လိပ်စာပါသည့်အက္ခရာတစ်လုံး၏ scan ဖတ်ထားသောမိတ္တူတစ်ခုလိုအပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၆ လအတွင်းပြောရမည့်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှဖြစ်လေ့ရှိသည်။
အဆင့်5- ဝင်မည်
အတည်ပြုချက်ကိုသင်ချက်ချင်းနီးပါးလက်ခံရရှိသည်ဆိုပါက (များသောအားဖြင့်တော့များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်); သင်၏ forex trading account အသစ်ကိုဝင်ရောက်ရန်သင်၏ login အချက်အလက်များကိုယခုသင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ယခု သင်သည် သင်၏ကုန်သွယ်အကောင့်ထဲသို့ ရန်ပုံငွေများကို အပ်နှံနိုင်ပါပြီ။ ကမ်းလှမ်းထားသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည် အများအားဖြင့် တော်တော်လေး စံထားပြီး ပါဝင်ပါသည်။ ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်များ၊ ဘဏ်ငွေလွှဲမှုများနှင့် အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များကဲ့သို့သော Neteller, PayPal ကနှင့် Skrill.
Forex Trading ၏ ထိပ်ဖျား ၁၀ - Forex ပွဲစားရွေးခြင်း
သင့်အတွက် မှန်ကန်သော ပွဲစားကို ရွေးချယ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ Forex စျေးကွက်တွင် သင့်လမ်းကြောင်းကို လမ်းညွှန်ရန် ကူညီပေးသည့် သင်၏ကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော Forex ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များမှာ -
ပွဲစားသည် tier-one လိုင်စင်ရအဖွဲ့ကဲ့သို့စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသလား FCA, ASICဒါမှမဟုတ် CySEC?
Forex ပွဲစားတစ် ဦး ရွေးချယ်ရန်မည်မျှအချိန်ကုန်မည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားနောက်အခန်းတွင် ၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းများကိုအတိုချုပ်ဆွေးနွေးပါမည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံး Forex Trading Platforms
Forex ပွဲစားကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဖို့ အချိန်မရှိဘူးလား။ သို့ဆိုလျှင် အောက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုအခကြေးငွေများ၊ Forex အတွဲများ နှင့် ချောမွေ့သော ကုန်သွယ်မှု အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှု အခကြေးငွေများ ပေးဆောင်သည့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော ပလပ်ဖောင်းများကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
AVATrade သည် Forex၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စတော့ရှယ်ယာ CFD များမှအရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသောတည်ထောင်ထားသောအွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သင်သည်မည်သည့်ကော်မရှင်မျှမပေးဘဲကုန်သွယ်နိုင်သည်။ အဓိကငွေကြေးအတွဲများပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့ခြင်းသည်အလွန်ပင်တင်းကျပ်သည်။ အဆင့်မြင့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများဖြင့်ပြန်လာသည့် MT4 သို့မဟုတ် AVATrade ပလက်ဖောင်းမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ AVATrade သည်အလွန်အမင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားပြီးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုလက်ခံသည်။ အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀ သာလိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ forex trading tips များသည်အောင်မြင်သောကုန်သည်တစ် ဦး မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကောင်းစွာနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုကြောင်းသင်မျှော်လင့်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ Forex စျေးကွက်မစတင်မီမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ကောင်းကောင်းနားလည်ရန်နှင့်ရေရှည်အစီအစဉ်ရှိရန်အရေးကြီးသည်။
သင်တို့သည်လည်းရန်လိုအပ်ပါတယ် Forex trading နှင့်ပတ်သက်သောကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်သည့်ဥပမာပြန့်ပွားခြင်း၊ ကော်မရှင်နှင့်နေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့သြဇာသက်ရောက်သောအခါ, ဒါကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အဓိကကျသည့်အရာဖြစ်နိုင်သည်။
Forex trading နဲ့ပတ်သက်လာရင် နည်းပညာပိုင်းနဲ့ အခြေခံကျတဲ့ သုတေသနရဲ့ အရေးပါမှုကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ အလေးမထားနိုင်ပါဘူး။ သင့်လက်ချောင်းထိပ်မှာ ရနိုင်တဲ့ forex trading tools အများအပြားရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒါကို အပြည့်အဝ အသုံးချဖို့ သေချာပါစေ။
အားလုံးသိထားရမည့်အချက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပေးနိုင်သောအကောင်းဆုံး Forex trading အကြံပေးချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာသရုပ်ပြအကောင့်စက်ရုံဖြင့်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အလေ့အကျင့်စုံလင်စေသည်။